(SAWIRRO) Iskusoo bax roob doon ah oo ka socda magaalada Gaalkacyo iyo xaaladaha abaaraha oo meel adag maraya | puntlandi.com
(SAWIRRO) Iskusoo bax roob doon ah oo ka socda magaalada Gaalkacyo iyo xaaladaha abaaraha oo meel adag maraya
Iskusoo bax roon doon ah ayaa maanta oo sabti ah ka socda magalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo ay boqolaal dadweyne ah ku oogayaan tukashada salaad Sunno ah.
Culimada gobolka iyo masuuliyiin dowladda Puntland katirsan ayaa haatan shacabka kula hadlaya garoonka kubada cagta Cawaale, iyagoo ilaaheey ka baryaya inuu raxmadiisa soo dadajiyo islamarkaana waxay shacabka ugu baaqayaan in la xoojiyo gurmadka abaaraha.
Wasiirka cadaalada iyo arrimaha diinta dowladda Puntrland Saalax Xabiib Jaamac ayaa todobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay iskusoo baxyo roob doon ah in laga sameeyo Puntland maalinta isniinta ah ee todobadkaan.
Xaalada abaaraha ee ka jira Puntland ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay iyadoo laga cabsi qabo inay arrintaan ka dhalato musiibo weyn oo aan horey loo arag maadaama gobolada Puntland oo idil ay abaartu si xoogan u hayso.
Sawirrada hoos idinka kaga muuqda waxaa lagasoo qaaday tuulada Bursaalax ee gobolka Mudug.